मुसा केही किन खुसी छन् जो छ, जीवित नजिकै मानिसहरूलाई छाँटकाँट छन्। धेरै चाँडै फिर्ता कोठा, पशुधन र कुखुरा लागि भवन मा मास्टर ठाउँ मुसा -, सामान्य जहाँ गर्मी र जाडो, र त्यहाँ सधैं स्वार्थपूर्ति गर्न कुरा हो।
को चिकन Coop मा चूहहरुमा संग लडाई धेरै खुशी संग मुसा चिकन फिड खान र चरा ग्रस्त गर्न सक्छन् किनकी, विष खतरनाक छ प्रयोग गर्न भन्ने तथ्यलाई द्वारा जटिल छ।
किन आवश्यक छ चूहहरुमा लड्न
हार्डी, बौद्धिक, तीव्र दाँत संग धूर्त जनावर मा लगभग कुनै पनि अवस्थामा बाँच्न र जो कुखुरा, चूहहरुमा लगभग सिद्ध लागि अवस्था समावेश निर्माण, मा। न्यानो खाना हरेक दिन ताजा, कुखुरा कहिल्यै, मुसा मेनु कच्चा अन्डा र पनि कोमल जवान चिकन विविध आक्रमण।
चूहहरुमा लागि अवरोध छैन पनि brickwork, एक्लै बोर्ड, जिप्सम बोर्ड र प्लास्टिक गरौं पनि अधिक छ।
साथै तिनीहरूले गर्न सक्षम एकदम को चिकन जनसंख्या बाहिर पातलो छन्, यी ठूलो मुसा विपत्ति, salmonellosis र रेबीज सहित खतरनाक रोगहरु, को वाहक हो।
मुसा विरुद्ध लड्न अल्ट्रासाउंड
तपाईं पटक साथ राख्न भने, कसरी चिकन Coop बाहिर चूहहरुमा ल्याउन को प्रश्न, यो जवाफ जन्म देती - अल्ट्रासाउंड।
आधुनिक उपकरणहरू तिनीहरूलाई आतंक कारण चूहहरुमा मा नकारात्मक असर जो अल्ट्रासोनिक छालहरू, फेंकना र व्यक्ति बुझ्ने गर्दैन। जे भए पनि, यो निर्माताहरु दावी त।
मोडेल जोखिम विभिन्न स्तर संग, repellents धेरै। तिनीहरूले सप्ताह को एक जोडी सक्षम अल्ट्रासोनिक वा विद्युत छालहरू चूहहरुमा छुटकारा प्राप्त फेंकना गर्न सक्नुहुन्छ, तर ...
पहिले, को चिकन Coop मा mains जोडिएको आउटलेट स्थापित गर्नुपर्छ। कम-संचालित यन्त्र ब्याट्री मा इच्छित प्रभाव दिन छैन। दोस्रो, एकाइ घडी को आसपास काम गर्न छ। तेस्रो, यो एक निश्चित तरिका मा अवस्थित हुनुपर्छ।
समीक्षा लागि, व्यावसायिक उपकरणहरू -40 देखि +80 ° C गर्न परिवेश तापमान दायरामा नेटवर्कमा सञ्चालन, विशेष मा, रूसी "आँधी 800" मुसा अप 800 वर्ग ठूलो क्षेत्र henhouse देखि उठाउन सक्छ। एम।
छलफल प्रभावकारी र बहुमुखी "ग्रैद एक-1000 + ABM" समायोज्य क्षमता, 1000 वर्ग को कुखुरा र पशुपालन फार्महरूको क्षेत्रमा प्रयोगको लागि सिफारिस गरिएको छ जो संग। एम। मुख्य कुरा तिनीहरूले पागल एक अप्रिय ध्वनि को प्रभाव अन्तर्गत बन्द कोठामा छैन गएका छन् गर्नुपर्छ भनेर, भाग्न गर्न मुसा तरिका छोड्न छ।
अर्को तरिका यस प्रकार चरा harming बिना henhouse मा चूहों को छुटकारा प्राप्त गर्न गोंद जाल छन्। त्यहाँ एक विशेष गोंद यस्तो केन्द्र मा प्लाईवुड को एक सानो टुक्रा पनीर, रोटी वा बिस्कुट को एक सानो बिट राखिएको छ जो को को किनाराको मा लागू गरिएको छ जो Alt, रूपमा छ।
जो कुखुरा प्राप्त गर्न सक्छन् एक ठाउँमा रात लागि आवश्यक प्रतिष्ठानहरु समाधान।
टास्ने को संरचना यो बाक्लो पन्जा मा लागू हुनुपर्छ यस्तो छ।
मुसा पक्रने अस्पष्ट को यो विधि को समीक्षा। धेरै कि वयस्क चूहहरुमा गोंद पालन विश्वास गर्छन्। र प्रक्रिया जनावर संग पासोमा हटाउन प्रेरणा कारण छैन छ।
फँसाना चाहे संग जाल
तपाईं खुशबूदार (पनीर वा बेकन) चारा संग एक ठूलो कृंसम्म पासोमा फसाउन व्यवस्थापन भने एउटै समस्या हुन्छ। को चिकन Coop मा चूहों को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी, जनावर को मृत्यु चाहनुहुन्छ नगर्ने धेरै कारीगरों मानवतावादियों प्रस्ताव। कब्जा प्रक्रिया, अनन्त हुन सक्छ एउटा बन्द लुपमा चलिरहेको: समातिए, लगे, मुसा फिर्ता, फेरि एक सर्कल मा समातिए, र त्यसपछि।
जाल वा एक गिलास जार (गमला) चारा खुशबूदार टुक्रा संग तल अडिएको प्रयोग सुझाव। पोत एक प्लेट को किनारा मा सेट को तल उकालो ढल्केको छ। विनम्रता penetrates को पीछा मा मुसा, पतन कि काठ को टुक्रा धक्का, र पोत जनावर समेट्छ। सबै को सबै भन्दा राम्रो प्लाईवुड वा धातु को एक पानामा राखिएको निर्माण छ, यो निजी अर्थव्यवस्था परे पनि कैदी बनाउन सुविधाजनक थियो।
त्यहाँ चिकन Coop मा चूहों को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी nelenivyh एउटा तरिका हो। एक ठूलो दूध डिब्बे फिट गर्न, र एक tapered भाग आफ्नो घाँटी जमीन माथि रहन्छ एक आकार को खाडल खनेर। लगभग 8 सेमी को एक प्वाल व्यास गरिरहेको पोत पर्खाल जमीन माथि हुन ताकि। यस सुगन्धित चारा मा राखे, ढक्कन बन्द गर्नुहोस्। स्वादिष्ट भोजन को खोज छ मा मुसा जो देखि सकिनँ उम्कन को सक्छन् मा हुन्छ।
तपाईं लागूपदार्थ र स्वीकार्य बिष को मद्दतले घर मा चिकन Coop मा चूहों को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी जान्नु आवश्यक छ।
एक यस्तो साधन एक दबाइ "गोल्यत" छ। यो को विशेष विष प्रभाव लिन्छ मात्र पछि 10 दिन छ। यो समयमा चलाख र धूर्त मुसा उपकरण बिल्कुल अहानिकारक छ भनेर पक्का गर्न समय, त्यसैले यसलाई खान्छन्। परिणाम Coop छाड्ने चूहहरुमा गराउँछ जो अक्सिजन को अभाव छ।
को "मुसा" किरा देखि केही मिनेटमा मृत्यु छन्। यो उद्देश्य लागि एक ampoule सामग्रीहरू मासु वा बीउ संग मिश्रित छ।
यसलाई जो चरा हानि गर्दैन, प्रभावकारी र दानेदार "Ratid" छलफल। यसको फाइदा पनि यसको संरचना यी corpses को अपघटन रोकन, ऊतक को mummification फैलाउने एक पूरक छ भन्ने तथ्यलाई छ। त्यसैले, अपघटन र माइक्रोबियल धम्की कुनै गन्ध छ।
छैन स्वाद कुखुरा विष गर्न, यो खाडल विपरीत पर्खालहरु मा5सेन्टीमिटरको व्यास भएको विशेष बक्समा लुकाइएको छ। मुसा संलग्न ठाउँ डराउँछन्, विपरीत पर्खाल मा एक प्वाल तिनीहरूलाई उपलब्ध निस्कनुहोस् विश्वस्त र तिनीहरूले शान्तपूर्वक विष संग चारा खान्छन्। एकै समयमा कुखुरा चुपचाप बक्स मा बसेर।
तर खतरा अझै पनि पाल्तु जनावर लागि रहन्छ। उदाहरणका लागि, बिरालोहरु एक विष कृंसम्म खाने द्वारा हत्या गर्दै हुनुहुन्छ।
कृंसम्म नियन्त्रणको लागि लोक उपचार
एक विष प्रयोग जोखिम छैन क्रममा, यो चिकन Coop लोक उपचार मा चूहों को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी थाहा आवश्यक छ।
पीठो र चिनी जस्तै मुसा। तसर्थ, विशेषज्ञहरु कागती यी उत्पादनहरु को बराबर अनुपात मा मिश्रण गर्न सुझाव, र यस्तो "व्यवहार" संग पानी को एक कचौरा राख्न। यस्तो संयोजन चूहहरुमा मृत्यु लागि हो।
बरु, तपाईं कागती प्लास्टर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र पनि चिनी आवश्यक छैन। पशु चाँडै अपच देखि मर्छन्। तर यी धन घर को अन्य बासिन्दाहरूलाई को पहुंच बाहिर राखिएको हुनुपर्छ।
बोट प्रेमीहरूको पनि, यो चिकन Coop मा चूहों को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी थाहा छ। शरद ऋतु क्रोकस (को लिली परिवारको), गर्मी मा blooming, धेरै विषालु। 10 G र बोट बीउ को 200 ग्राम एक मिश्रण hens लागि दुर्गम ठाउँमा भर्न आवश्यक छ।
Chilibuha बीउ जो strychnine देखि, चीनी, किसमिस र कसा भयो stearin संग बराबर अनुपात मा मिश्रित छ। मिश्रण, मुसा प्वालहरू नजिकै फैलाउन अर्को पकाएको सिमी हालिएको छ। मुसा छैन केही दिनमा हुनेछ।
को चूहहरुमा nightshade बिरुवाहरु, प्रकार मा हत्या गर्दै काग आँखा, आफ्नो बीउ छेद मा खन्याउन भने कुचो, aconite antidotal।
तर, यी उपकरण सबै पनि चरा लागि खतरनाक छन्।
चूहहरुमा घृणा उत्पन्न प्राकृतिक उपचार
विष प्रयोग बिना चिकन Coop मा चूहों को कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न? उपकरण रूपमा आफ्नो लोक मात्र निरुत्साहित।
सबैभन्दा यी लोकप्रिय काठ खरानी छ। को चूहहरुमा धेरै सफा र खुट्टा संग खरानी चाट्नेछन्। उनको छ जो क्षार, मुसा को नाराज stomachs र जनावर को inhospitable ठाउँ छोड्नुहोस्। चोट खरानी तहखाने Coop मा हालिएको र धन को एक बाल्टिन सतह को 5-10 वर्ग मीटर लागि खाताहरू।
चूहहरुमा, गन्ध एक धेरै नै सूक्ष्म अर्थमा, तैपनि तिनीहरू सबै शिकारीहरु हो, आगोले झुलसे, ऊन को गन्ध खडा गर्न सक्दैन, र एक खतरनाक ठाउँ छोड्न प्रयास गर्नुहोस्, कोसँग तिनीहरूले गन्ध सम्बद्ध मा।
मुसा गंध elderberry, फलियां, प्याज, Rosemary सहन छैन। यी बिरुवाहरु को सबै चिकन Coop को कुना मा decomposed गर्न सकिन्छ।
औषधीय chernokoren (उहाँले eloquently मानिसहरूलाई krysogonom र brambles भनिन्छ छ) को कोट गर्न स्वाभाविक अपनाउँछन् भन्ने thorns छ। चूहहरुमा छुटकारा गर्न किनभने thorns, तिनीहरूले आफ्नो बाटो बाहिर जान सक्छ र प्वाल पछिको खन्नुहोस् कहिल्यै।
को चूहहरुमा तिनीहरूले केही दिन "अनुकूल" Fed राई वोदका मा भिगो crumbs थिए जसमा ठाउँहरू छोडेर छन्। मुख्य कुरा माथि Sober र खाली भाँडा रूपमा बित्तिकै एक व्यवहार राख्नु तिनीहरूलाई दिन छैन।
मुसा विरुद्ध लड्न पशु
को चिकन Coop मा चूहों को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी, तिनीहरूले जनावर थाहा छ। Peculiar गन्ध बिरालोहरु आफ्नो क्षेत्रमा चिनो कि, चूहहरुमा repels। एक साइबेरियन बिरालोहरु आनुवंशिक स्तरमा उत्कृष्ट शिकारी हो। बिरालो मात्र तातो गर्मी रात मा, प्रकार Sphynx पनि चूहहरुमा समात्नुहोस्, तर, दुर्भाग्य।
थप फलदायी शिकारी कुकुर छन्। यसबाहेक, स्याल टेरियर्स र dachshunds कुखुरा समातेर छैन, यो बुल टेरियर्स गर्न विरोध रूपमा, त्यसैले तिनीहरू घर चलान गर्न डराउनु पर्दैन।
Geese र turkeys, तिनीहरूले कुखुरा साथ सँगै राखिएको छ भने राति चूहहरुमा को उपस्थिति मा अलार्म जुटाउने मात्र होइन, तर पनि असहाय hens रक्षा गर्न सक्छन्।
Hedgehogs मुसा मार्न प्रकृति द्वारा डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ, घर आशुक्रोधी को एक परिवार बसोबास भने, रात उहाँले सुरक्षित गरिनेछ।
तिनीहरूले चिकन Coop मा चूहहरुमा, व्यवसायीक उन्मुक्ति कसरी जो कोहीले भन्दा राम्रो थाहा छ। मुसा को आक्रमण विपत्तिजनक भयो भने, र अन्य नियन्त्रण विधिहरू काम छैन, तपाईं एक विशेष दृढ जाने छ। विशेषज्ञहरु महत्वपूर्ण, मृत मुसा हटाउने कीटनाशक चयन, deratization पूरा र, हुनेछ।
पनि चरा सामान्यतया किनभने उनको सुरक्षित लागि व्यावसायिक प्राविधिक वा रासायनिक हालतमा निकाल्नु गर्न आवश्यक छैन।
जो यो किरा नियन्त्रणको लागि कसैको सिफारिस उपकरण छ पनि भने, उपचार गर्नुपर्छ विशेषज्ञहरु सन्देहपूर्ण देखिन्छ। आखिर, यो स्वास्थ्य र प्रियजनहरूलाई को ज्यान, र बस घरेलू जनावर र कुखुरा खतरामा पार्न सक्छ।
त्यहाँ धेरै लोक उपचार र प्रविधी, को चिकन Coop मा चूहों को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी छन्। हामी ध्यान दिएर र responsibly सिफारिसहरू अध्ययन गर्न आफ्नो विकल्प दृष्टिकोण आवश्यक छ। प्रतीक्षा अनावश्यक आक्रमण प्राकृतिक प्रकोप को फारम लिन नगरेसम्म। मुसा सावधान हो, र तपाईं आफ्नो पर्याप्त छैन जब सङ्घर्ष सुरु भने, उनीहरूले चाँडै बाँच्ने प्रतिकूल ठाउँ छोड्न हुनेछ।
बगैंचामा र घर को कीरा किरा
गोभी किरा - एक वाक्य छ! सुझाव माली
कपडा मेमोरी: विवरण र संरचना
ओवन मा चिकन खाना पकाउने
मेष मानिस-बुल: विशेषता, Horoscope। जो मेष फिट
सिलिकॉन एनिमेल्स: विशेषताहरु, दायरा र लागत
किशोरों को मनोवैज्ञानिक विशेषताहरु
पूर्व-मसीही रूस मूर्तिपूजक परम्परा: वर्णन, रीतिथितिहरू, संस्कार, र रोचक तथ्य
महिला को 70th वार्षिकोत्सव भएकोमा बधाई